IFransi iqokelela imvula eneasidi evela kwiCanary Islands
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » IFransi iqokelela imvula eneasidi evela kwiCanary Islands
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Resorts • Safety • ISpain Iindaba Eziphambili • News Sustainability • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuqhuma kwentaba-mlilo eseCumbre Vieja National Park ngeCawa kunyanzelise abahlali abangama-6,000 kwisiqithi saseLa Palma ukuba bashiye amakhaya abo. Ngokwokuhlaziywa kweCopernicus yeNkonzo yoLawulo oluNgxamisekileyo ngoLwesine, izakhiwo ezingama-350 zitshatyalalisiwe.
Iziqwenga zesulphur dioxide zimiselwe ukutshayela iFrance kunye nolwandle lweMeditera kule mpelaveki.
Ukuxinana okuxineneyo kwamafu esulfure dioxide kuya kufikelela kubude obuyi-1,000 3,000 ukuya kuma-XNUMX XNUMX eemitha.
ICanary Islands Volcanology Institute iqikelele ukuba ugqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo iCumbre Vieja evelise loo sulphur dioxide inokuhlala "phakathi kweentsuku ezingama-24 ukuya kwezingama-84".
I-Keraunos, iinkanyamba zaseFrance kunye nokujonga kweendudumo eziqatha, namhlanje babelane ngomzobo ovela kwinkqubo ye-EU yaseCopernicus ebonisa ukuba iiplasma zesalfure dioxide, ezibangelwe kukuqhuma kwentaba-mlilo yaseSpain Canary Islands, zimiselwe ukutshayela iFrance kunye nolwandle lweMeditera kule mpelaveki. Ukuxinana okuxineneyo kwamafu kuya kufikelela kumphakamo we-1,000 ukuya kuma-3,000 eemitha.
Fransi kwaye iindawo zeMeditera ziqikelelwa ukuba zizive iziphumo zolu dubulo, njengoko amafu azaliswe yisulfure dioxide enyukela eYurophu, isenza imvula ibe neasidi ethe kratya.
The Canary Islands IZiko leVolcanology (i-Involcan) liqikelele ukuba ugqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo iCumbre Vieja evelise loo sulphur dioxide inokuhlala "phakathi kweentsuku ezingama-24 ukuya kwezingama-84".
Ngokutsho kweengcali, isalfure iyadibana nomphunga wamanzi esibhakabhakeni kwaye inika isalfuric acid, into edala imvula eneasidi. Ngenxa yoko, imvula kwiintsuku ezizayo iya kuba ne-asidi ngakumbi kunesiqhelo kwiindawo ezichaphazelekayo.
Isalfure dioxide inokuchaphazela imeko-bume kunye nempilo yabantu ngokufanayo, ibangele ukucaphuka emiphungeni nasemehlweni. Umntu, nangona kunjalo, uxele ukuba le meko ayinakuba yomelele kuba amasuntswana asasazeke kakuhle.
The ugqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo ebekwe eCumbre Vieja National Park ngeCawa inyanzelise abahlali abangama-6,000 kwisiqithi saseLa Palma ukuba bashiye amakhaya abo. Ngokwokuhlaziywa kweCopernicus yeNkonzo yoLawulo oluNgxamisekileyo ngoLwesine, izakhiwo ezingama-350 zitshatyalalisiwe.
Kuqhambuke intaba-mlilo entsha ngobusuku bangoMvulo nge Isiqithi saseCanary Canary emva kwenyikima engu-4.1 yabhaliswa, kwaveliswa udaka oluninzi lwaye kwabangela abantu abangama-500 besi siqithi ukuba baphume. Abacimi-mlilo bebesebenza ukuhambisa ukuhamba kwentaba-mlilo kude nolwandle njengoko unxibelelwano phakathi kwelava kunye nolwandle lwamanzi kunokudala umsi onetyhefu.